कस्तो प्रेमी चाहन्छन त युवतीहरु – Online Nepal
कस्तो प्रेमी चाहन्छन त युवतीहरु
April 14, 2020 351
हरेक प्रेम स’म्बन्धमा उतारचढाव आइरहेको हुन्छ । प्रेम आफैमा विना स्वार्थ चल्ने गर्दछ । तर कहिलेकाहीँ प्रेममा सुझबुझ र एक अर्काको भावना नबुझिदिँदा प्रेम टुट्ने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा महिलाको भावना कस्तो हुन्छ भनेर नजान्नाले पनि प्रेममा दरार आउने गर्दछ । त्यसले कोही पुरुष प्रेममा हुनुहुन्छ भने यी कुराको जानकारी राखेमा
तपाईको प्रेमी तथा प्रेमिकासँगको स’म्बन्ध अझै सुमधुर हुने गर्दछ । सबै मानिसलाई आफ्नो बारेमा अरुले राम्रो भनिदिउन् भन्ने चाहना हुन्छ । अझ महिलामा यो चाहना बढी मात्रामा हुने गर्दछ । यस्तोमा तपाई प्रेमीका सँगको भेट वा कुराकानीमा सकेसम्म उनको बखान गर्न नछुटाउनुहोस् ।
हरेक प्रेमीका आफ्नो प्रेमीले आफूलाई स्वतन्त्रता दिउन् भन्ने चाहानछन् । उनिहरु आफ्नो बारेमा प्रेमी उदार हुन् भन्ने सोच्दछन् । तसर्थ आफ्नी प्रेमीकालाई कुनै कुरामा बन्देज वा प्रतिबन्ध नलगाउनुहोस् । अधिकाशं महिलालाई साना कुराले पनि निकै प्रभाव पार्दछ । उनिहरु आफ्नो प्रेमीले प्रस्ताव गरेको, पहिलो पटक भेटेको लगायत अन्य दिनहरु सम्झिउन् भन्ने चाहान्छन् ।
तर पुरुष भने यस्ता मिति खासै ख्याल राख्दैनन् । जसले कहिलेकाहि तपाईको प्रेमिकाको मन खिन्न बनाउने गर्दछ । हरेक महिला आफ्नो प्रेमीले सघाउन् वा साथ दिउन् भन्ने चाहान्छन् । कार्यालयको काम, शैक्षिक बिषय वा घरायशि बिषयमा पनि प्रेमीको साथ होस् भन्ने उनीहरुको चाहाना हुन्छ । यसतोमा सघाउने वा साथ दिनाले तपाईकी प्रेमिका तपाई प्रति निकै सकारात्मक बन्ने गर्दछिन् ।
के तपाईले आफ्नो प्रेमिकालाई कहिल्यै सरप्राइज दिनु भएको छ । सरप्राइज दिन कुनै महंगो वस्तु वा उपलब्धि चाहिदैन । मात्र अरुले भन्दा फरक ढंगले उनलाई उपहार, कुनै निर्णय वा उपलब्धी सुनाउनु भयो भने यसले उनलाई सरप्राइज दिन सक्छ । प्रेम भनेको भावनामा निर्भर रहने गर्दछ । तर कतिपय अवस्थामा यसलाई प्रकट वा देखिने गरी बुझाइनु समेत पर्दछ ।
तसर्थ हरेक महिला आफ्नो प्रेमीले आफुहरु बिचको प्रेम प्रकट गरुन् वा देखाउन् भन्ने चाहान्छन् । जसले उनीहरु आफ्नो पुरुषका लागी महत्वपुर्ण छु भन्ने ठान्दछन् । कहिल्यै पनि आफ्नो प्रेमिकालाई अन्य महिला वा पूर्व प्रेमिकासंग तुलना नगर्नुहोस् । यसरी तुलना गर्नाले उनिहरु तपाईको नजरमा आफ्नो स्थान कम वा अरुको बढि छ भन्ने ठान्दछन् । पन्च कोशी टाईम्स बाट साभार ।
Prevविश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिकएको कोरोना भाइरसले अमेरिका आक्रान्त बनिरहेका बेला आँधीले थप पीडा दिएको छ ।
Nextकिर्तिमानी पौडी खेलाडी गौरिकाका बाबुलाई कोरोना, गरिन् यस्तो अपिल
छोरी भएरै जन्मेको कारण बुवाले हेला गरेकी पुजा शर्मा कसरी बनिन् चर्चित नायिका ? (भिडियो हेर्नुस्)
डेरा गरेर बसेका विद्यार्थीलाई खुशीको खबर : घर पुर्याईदिने निर्णय
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (61934)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50985)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45319)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44770)
जेठ ३ गते शनिबारदेखि यस्ता कडा नियमहरु लागु हुने, लकडाउनमा यस्तो कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस (43330)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (29162)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27819)
घरमा रोप्नुहोस् यी बिरुवा, हुन्छ गरीबी र दरिद्रताको अन्त्य
राति सुत्नुबेला कपाल बाध्ने की छोड्ने ? जान्नुहाेस्